"Maamulka Puntland ee sii dhacayaa Wax Badan oo Amaanka ah ayuu Lumiyay"Musharax Muxiyadiin Cali Yuusuf.
Garoowe:- Musharax Prof Muxiyadiin Cali Yuusuf oo ka mid ah Musharaxiinta u Taagan xilka Madaxtinimo ee Pl ayaa shir Jaraaid oo uu ku qabtay Gudaha Magaalada Garoowe waxa uu kaga hadlay sida ugu Haboon ee loo qaban qaabin karo inay Puntland ka dhacdo Doorasho Xalaal ah isla markaana loo wada dhanyahay.
Musharax Prof Muxiyadiin Cali Yuusuf ayaa xusay in hadii la helo doorasho Loo dhan yahayah isla markaana dhamaan ay shacabka Puntland Kalsooni Buuxda ka Qabaan la gaadho barwaaqo iyo Is Bedel dhab ah oo dhaama Kii Laga soo Gudbay ee Afrta sano ahaa.
Musharax Muxiyadiin Cali Yuusuf ayaa Kulan wareedkaasi uu ku qabtay Guriga uu ka deganyahay caasimada Garoowe waxa kaloo uu ku sheegay inay dadku doonayaan is Bedel si loo Helo Buu Yiri Amaan iyo Kala danbayn buuxda.
"Puntland Meesha Ugu Muhiimsan ee u baahan in wax laga qabto waa dhanka Amaanka iyada oo Maamulka haatan wakhtigiisii sii dhamanaayo uu wax badan oo Amaanka ah Lumiyay taasi waxa kaliya ee lagu Heli karaa waa iyada oo helo Maamulka dhaama Kii Hore" Ayuu Yiri Prof Muxiyadiin Cali Yuusuf.
"Hadii la helo Amaan fiican oo sida haatan dhaama waa la Hubaa in la heli lahaa dhaqaale fiican oo ay dalka iman lahaayeen SHirikaad Ajaanib ah oo Kaba Kobaca dhaqaale ee Gobolka Laakiin hadii Amaanku Lumo sii Laysugu Aaminiyaa Ayuu Yiri Prof Muxiyadiin Cali Yuusuf"
Dhanka kale Muxiyadiin Cali Yuusuf waxa uu soo Qaatay hadii la doorto waxa ugu wayn ee uu wax ka qabano waxa uu sheegay in Budhcad Badeeda Curyaamisay Puntland Ku samaynayo dhaqan Cilin isla markaana uu shaqooyin u Abuurayo.
Prof Muxiyadiin Cali Yuusuf ayaa safka Hore kaga Jira raga laga Baqayo inay ku soo baxaan Hogaaminta Puntland Marka La gaadho sanadka 2009- Horaantiisa oo doorashada Puntland ay ka dhacayso Gudaha Caasimada PL ee Garoowe.
Sidoo Muxiyadiin Cali Yuusuf ayaa ah Ninkii Ugu horeeyay ee ku dhawaaq inuu yahay Musharax iyada oo haatan Musharaxiinta Puntland ay gaadhayaan 32- Musharax.
AWOODDA MADAXWEYNAHA DFKMG:
1. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waa :
a) Madaxa Dowladda
b) Taliyaha Guud ee Cidamada Qalabka Sida
c) Astaanta Midnimada qaranka
2. Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa xilkana ka qaadayaa Wasiirka Koowaad ama kala diraa xukuumadda haddii ay waydo codka kalsoonidda Golaha Shacabka.
5. Wasiirka Koowaad ayaa u jeedin doonaa Madaxweynaha magacyada dadka ku habboon in loo magacaabo Wasiirro iyo Wasiirro ku xigeenno iyadoo aan lagu xirin inuu xubin ka yahay Golaha Shacabka.
1. Haddii in ka badan boqolkiiba konton(50%) Golaha Shacabku ka soo jeediyo go'aan kalsooni daro ah Wasiirka Koowaad, Madaxweynuhu waxaa uu xilka ka qaadayaa Wasiirka Kowaad iyo Golihiisa Wasiirada.
EEG DASTUURKA DFKMG: http://www.somalitalk.com/dastuur/tfg.pdf (draft)
OGEYSIIS: SOOMAALIDA CANADA
Dec 21, 2008: Warbixin iyo Sawiro Heshiiskii Dhexmaray Mushariixinta iyo Maamulka Puntland
Heshiis Dhexmaray Musharixiinta Shacabka Putnland iyo Maamulka Puntland lagana soo saaray Qodobo Muhiima heshiiskaas oo ay ku guuleysatay in uu dhaco Wasiirka Haweenka iyo Arimaha Qoyska Wasiir Caasho Geele Diiriye.
Kulankaan oo ka dhacay Xarunta Wasaarada Hormarinta Haweenka iyo Arimaha Qoyska ee Magaalada Garowe ayaa laga soo saaray Qodobo ay ku heshiiyeen Mushariinta Shacabka Puntland iyo Maamulka Puntland isla markaasna aan loo ogalayn in ay goob joog ka ahaato saxaafada ayaa gabagabadii loo soo bandhigay saxaafada Qodobadii ka soo baxay iyo heshiiskii dhexmaray Musharixiinta iyo Maamulka Puntland.
Waxaa isla markiiba ka hadlay Madaxweynaha Puntland Maxamuud Muuse Xirsi (Cadde Muuse) oo soo bandhigay in ay heshiis wada gaareen Musharixiinta Shacabka iyo Maamulka Puntlnad soona sooreen qodobo muhiima waxaa sido kale cadeeyey in heshiis dhexmaray Gudoomiyaha Musharixiinta Cabdiraxman Maxamed Faroole oo isna cadeeyey in heshiis ay wada gareen Musharixiinta iyo Maamulka Dowlad Goboleedka Puntland.
Intaas kadib waxaa Qodobadii heshiiska ay isla gareen ku dhawaaqday Wasiirka Hormarinta Haweenka iyo Arimaha Qoyska Wasiir Caasho Geele Diiriye oo fidisay gogasha khilaafka lagu soo afjarayey sidoo kale Wasiirka ayaa soo qaban qaabisay doodii mushariixinta oo gogol dhig u ahayd in uu dhaco shirka wada heshiisiinta Musharixiinta iyo Maamulka,
Qodobadii ay soo saareen iskuna afgarteen Musharixiinta iyo Maamulka Puntland oo ahaa sitada tan:-
1. In la magacaabo Gudi ka kooban 8da Isin oo ka kala socda Dodobada Gobol ee Deegaaka Puntland.
2. In Nabadgelyada iyo Sugida Amaanka inta laga gaarayo waqtiga doorashada ay masuul ka tahay Dowladda
3.In dhamaan daaqada laga saaro wixii khilaaf ah ee u dhaxeeya musharixiinta iyo Maamulka Puntland
4. In wixii khilaaf ah oo ka yimaada baarlamaanka ay go'aan ka gaarayaan Isimadda la isku afgartay hadii ay xalin waayaan Guddiga Ansixinta iyo Xallinta Khilaafaadka.
5. In Musharixii la yimaada burburin iyo amaan darro ay wax ka qabtaan Musharixiinta iyo Maamulka Puntland si wada jir ah.
Waxaa halkaas lagu soo gaba gabeeyey heshiis dhexmaray musharixiinta iyo maamulka puntland kaas oo la filaayo in uu hirgalo waxaana laga saaray meesha walaacii ay dadweynaha reer puntland ka qabeen in doorashada dhici waydo iyadoo la soo bandhigay isafgarad iyo cadeyn xoogleh.
Suxufi: Farxaan Yaasiin Mire (isqootax)
Dec 21, 2008: Gacmo dheere Oo Sheegay Inuu Mudo Bil Ka Yar Soo Magacaabi Doono Xukuumad Xili Khilaaf Hadheeyey Dowlada KMG ah.
Raysal wasaaraha dhowaan uu magacaabay madaxweynaha xukuumada FKMG ah Max'ed Max'ud Guuleed Gacma Dheere ayaa sheegay xili aan weli la ansixin inuu baarlamaanka hor tegi doono islamrkaana soo dhisi dono xukuumad cusub iyadoo ay baarlamaanka ka dhex jiraan kala qaybsan siyaasadeed oo nuur cadde iyo madaxweyne yuusuf ah .
Gacma dheere oo Shir Jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Baydhabo ayaa tibaaxay sida ay uga go,an tahay inuu la wareego xilka jagada Raysal wasaaranimo iyadoo uu ka hadlay dhowr arimood oo ay kamid tahay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo nuur cadde .
Sidoo kale raysal wasaaraha cusub ee Gacma Dheere ayaa sheegay in bil gudaheeda uu xukuumad cusub ku soo dhisi doono islamarkaana uu Barlamanka hor keeni doono isaga oo baaralmaanka weydiisan doona inay ansixiyaan taaso uu tilmaamay inuu rajo weyn ka qabo in kalsoonida la siin doono .
Dhinaca kale Max�ed Max�uud Guuleed Gacma Dheere ayaa waxaa uu ku gacan saydhay xukuumadda uu hogaamiyo Raysalwasaaare Nuur Cadde isagoo ku tilmaamay in ay tahay mid aan sharci ahayn islamarkaana carabka ku adkeeyey in uu waqtigeedii dhamaaday .
Si kastaba ha ahaatee hadalka gacma dheere ayaa sii xoojinaya khilaafkii siyaasadeed ee ka dhex aloosan nuur cadde iyo madaxweyne yuusuf xili ay ku kala qaybsan xoogani ka dhex jiro baarlamaanka gudahiisa oo kala taageersan labada oday .